Naadiyada akhriska oo hawlihii ay bulshada u hayeen istaageen xanuunka Karonaha darti – Radio Daljir
Naadiyada akhriska oo hawlihii ay bulshada u hayeen istaageen xanuunka Karonaha darti
Juunyo 9, 2020 7:15 g 0
Naadiyada akhriska oo hawlihii bulshada ay u hayeen istaageen xanuunka Karonaha (COVID-19) darti ee dunida ka jira ayaa hakiyey kulamadi, bandhigyadii buugta iyo hawlihii xarumaha wax akhriska ay bulshada u hayeen, iyadoo Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ilaa hadda xaqiijisay 2146 kiis oo xanuunka Karoona soo ritay, halka dhimashaduna tahay 406 qof.
Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim oo kamid ah masuuliyiinta xarunta Maankulan ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in tallaabooyinka looga hortegayo fayraska Karoonaha oo ay kamid tahay in dadku kala fogaadaan ay keentay in ay xarunta xiratahay tan iyo bishii Maarso ee sanadkaan, taasoo keentay in dhallinyartii xarunta maalin kasta sida joogtada ah wax ugu akhrisan jirtay guryahooda joogaan.
“Waxaa kaloo baaqday barnaamijyadii doodaha aqoon kororsiga ahaa oo bil kasta la qabanayey iyo falanqayn todobaad walba loogu samaynayey buugta ee xarunta ka dhacayey,” ayuu yiri Cabdiraxmaan.
Naadigaan oo qabanjiray sanadkasta carwo buugeedka Kismaayo (KBF) ayaa sheegay in haddii saamaynta xanuunka ay sii jirto sanadkaan ay u badan tahay inuusan qabsoomin bandhiggu. Xarunta ayaa wajahaysa culaysyo dhaqaale kaddib markii ay joogsatay habkii lagu bixinayey taakulaynta oo ah dhaqaalihii xaruntu ka helaysay xubnaha tabarucaadka bixinayey taasina ku tahay culays hadda haysta xarunta.
Naadiyada dhaqanka iyo akhriska waxay ka jiran gobollo badan oo Soomaaliya iyo meelo ka baxsan waddanka, waxayna ku abuurmeen hab iskaa wax u qabso ah oo aqoonyahanno iyo dhalinyaro is abaabushay ay isaga ururiyeen lacago ayna ku bixiyaan kirada, shaqaalaha iyo adeegyada kale, iyadoo inta badan aysan jirin cid si toos ah u caawisa xarumahaan oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, waxayna wajahayaan xilligaan xanuunka karoonaha jiro culaysyo dhaqaale oo aysan jirin meel ay ula ciirsadaan.
Suldaan Nayruus oo kamid ah masuuliyiinta naadiga akhriska ee Maskaxshiil ee ku yaal Muqdisho ayaa sheegay in wakhtigaan guryaha la joogo inay jiraan dhinac kale oo faa’iido ah oo uu u yeeshay qalinleyda.
“Annigu macalin ayaan ahaa, hadda gurigaan macalin ka ahay oo carruurtaydii ka jogosatay iskuuolada ayaan wax ku baraa, tan kale qoraayaal badan oo aan horay jaanis u heli jirin hadda waxay guryahooda ku heleen wakhti ay wax ku qoraan ama buug qabyo ka ahayd ku dhamays tirtaan” ayuu yiri Suldaan Nayruus.
Suldaan Nayruus wuxuu sheegay in bishiiba laba tababar oo dhigaalka toolmoon iyo tiirarkiisa ay qaban jireen haddase ay joogsadeen, sidoo kale dhaqaalaha xaruntaas ku baxa oo USD $600 doolar bishii gaarayey ay qaybtood ka heli jireen buugaagta la iibsado, haddana aysan jirin buug la iibsado oo dadku aysan soo aadin maktabahada iyo miisaska buugta lagu iibiyo, taasina ay ku noqotay culays dhaqaale.
Naadiyada Akhrisku waa isha aqoon aan rasmi ahayn ay ka helaan dhallinyaradu, waxaa u dheer waa goobahay ku kulmaan kana helaan buugaag ay akhristaan iyo doodaha cilmiga bulshada, waxaa kale oo ay qaban qaabiyaan xarumahaani carwooyinka buugta ee wadanka meelo kala duwan ka hana qaaday sanadihii la soo dhaafay.
Sufiyaan Siciid waa xoghayaha xarunta dhaqanka ee Awjaamac ee magaalada Nairobi, wuxuu sheegay in xaruntu ay saddex bilood wakhti ku dhow hadda xirantahay, taasina ay keentay in ay hakadaan todoba tababar oo ku aadan dhaqanka iyo xirfadaha oo sanad kasta ay xarunta siin jirtay tobanaan rag iyo dumar ku nool Nairobi.
Yaasmin Cabdi Axmed oo ah gabadh 20 jir ah kuna nool xaafadda Eastelgih ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay inay bishii Janaayo iska diwaangelisay xarunta Awjaamac si ay u barato falkinta cawda iyo qurxinta haweenka ayna sugayso goorta wax furmi doonaa.
“Sanadkii 2019 ayaa tababarkii socday iga buuxsamay, waxaan sugayey sanadkaan inaan ka faa’iidaysto mase dhicin, Alle ha naga dulqaado waase rajayn inaan helo xirfadaas aan jeclahay inaan barto,” ayey tiri Yaasmiin.
Saynab Xaaji oo ah hawlwadeenada Akademiye goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo AGA ayaa sheegtay in doodihii, tartankii akhriska iyo barnaamijyada xarumaha kala duwan qabanayeen ahaayeen isha lagu kobciyo barashada afka iyo dhaqanka, sidoo kale ay xarumuhu yihiin goobaha dhallinyaro badan ay ka helaan isku xir iyo aqoon bulsho ayna oo aysan meel kale ka helayn.
“Akadeemiyaha tababaro afka ah oo uu qabanayey ayaa baaqday, waxayna wax kastaa ku xiranyihiin hadba sida xanuunku noqdo iyo habka masuuliyiinta caafimaadku u soo saaraan awaamiir ku aadan in dib loo furo adeegyadii bulshada” ayey tiri Saynab.
Masuuliyiinta xarumaha ee aan la hadlay waxay isku raaceen inaysan marna ka caajisayn sidii ay uga gudbi lahaayeen xaaladda adage ee lagu jiro ee saamaysay hawlihii naadiyada. Tan iyo intii xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya kiiskii ugu horayeeyey bishii Maarso waxaa xirmay goobihii waxbarashada iyo kuwii bulshadu isugu imanaysay.
Gunaanadkii waxaan ugu baaqayaa maamulada, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada in naadiyada iyo maktabadaha sida mutudawacnimada leh bulshada ugu adeegaya la taageero xilligaan adag si aysan u xirmin, marka xanuunku dhammaadana hawlahii ay bulshada u hayeen ay dib ugu bilaabaan.
Maqaalo Kale 297 Wararka 20430